प्रबिधि Archives - Page4of4- Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
‘इण्डिया सफ्ट २०१७’ मा २५ नेपाली स्टार्टअप युवाको समुह सहभागी हुदै
भारतको हैदरावादमा यही फेब्रुअरी १३ र १४ गते इंडिया आइटी शोको रुपमा “इण्डिया सफ्ट २०१७” आयोजना हुदै छ । इसिएसको मुख्य आयोजना र भारत सरकार को सहयोगमा हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई नेपालका तर्फबाट एक डेलिगेसन समुह जाने भएको छ । २५ स्टार्टअपका प्रतिनिधि, केहि उद्यमी र पत्रकार सहित ३२ जनाको टोलि उक्त कार्यक्रममा नेपालको डेलिगेसनको रुपमा सहभागी हुन् लागेको हो । विश्वका ७५ भन्दा ब...
काठमाडौँ, १८ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी हिमालय एअरलायन्सले थप नयाँ विमान भित्र्याएको छ । जर्मनीमा बनेको ३२०–२१४ सिरिजको उक्त विमान आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको हो । हिमालयका पाइलट फ्रेन्च नागरिक क्याप्टेन ओल्ट्राले उडाएर ल्याएको उक्त विमानको विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ । योसँगै कम्पनीको विमान सङ्ख्या दुई पुगेको छ । यसअघि सन् २०१...
काठमाडौँ, १८ माघ । सूचना प्रविधिप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । पछिल्लो क्यान इन्फोटेक मेलामा सर्वसाधरणले गरेको अवलोकनले आधुनिक प्रविधिप्रति ‘क्रेज’ बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल ९क्यान० महासङ्घको आयोजनामा सञ्चालित २३ औँ संस्करणको ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१७’ को तीन लाख १० हजार ९८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । यद्यपि, यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । अघिल्लो वर्ष ती...
राहदानी फाराम अब मोबाइलबाट नै भर्न सकिने
काठमाडौं, १९ पुस : नयाँ राहदानी बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नु होस् । आवेदन फाराम अब आफ्नै मोबाइल फोनबाट भर्न सकिने भएका छन् । चौँथो पुस्ताको मोबाइल सेवा प्रारम्भ भएको दुई दिनपछि एप्पलको आइओएस र एन्ड्रोइड मोबाइलबाट राहदानी फाराम भर्ने र निवेदन दर्ता गराउने सुविधा उपलब्ध भएको छ । सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राहदानी विभागले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सूचना प्रविधिको उपय...
नेपाल टेलिकमले आइतबार नयाँ पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा सुरु गरेछ । पहिलो चरणमा काठमाडौं , पोखरामा क्षेत्रमा मात्र यो सेवा उपलब्ध छ । यो सेवा कसरी चलाउने भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । जान्नै पर्नेै केहि टिप्सहरु यहाँ प्रस्तुत छ । मोवाइलमा 4G चल्छ कि चल्दैन कसरी जान्ने ? तपाईंको मोवाइल फोनको नेटवर्क सेटिङमा गई फोनले कुन-कुन प्रविधिमा काम गर्छ हेर्न सकिन्छ । उपलब्ध बिकल्पमध्ये 4G/LTE र...
भाइबरको पब्लिक एकाउण्ट सेवा सुरु
काठमाडौं । भाइबरले व्यवसायिक क्षेत्रको लागि पब्लिक एकाउण्ट सेवा सुरु गरेको छ । उक्त सेवाले व्यापार व्यवसाय र ब्राण्डहरुलाई उनीहरुका विश्वव्यापी श्रोतासँग जोड्नका लागि मद्दत गर्ने जनाएको छ । यसले भाइबरको नयाँ व्यवसायिक समाधानले सबै प्रकारका ब्राण्डहरुलाई सेवाग्राही र प्रमुख सेवाग्राहीसँग सम्बन्ध बनाइराख्न मद्दत गर्नेछ । पब्लिक एकाउण्टको सहायताले व्यवसायीहरु, ब्राण्डहरु र चर्चित हस्तीहरुले भाइबर...
सोसल मिडिया प्रयोगले डरलाग्दो साइवर थ्रिएट र चुनौती निम्त्याएको छ । कही समय अघि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरर्बगको ट्विटर एकाउण्ट ह्याक हुनुले विश्वमा साइवर थ्रिएटरको चुनौती कति धेरै छ भन्ने कुरालाई छर्लगै पारिदिएको छ । जुकरर्बगको एकाउण्ट ह्याक हुनुले प्रविधि प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा रम्नेहरु सबैले महत्वपूर्ण पाठ सिक्नु पर्ने देखाएको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा अभ्यस्त रहनेहरुले एउटै पासवर्ड जता...
बढ्दो सूचना प्रविधिको विकास र बिस्तारले युवा पुस्तामाझ प्रसस्त अवसरहरु थपिदै आएका छन् । अन्तराष्ट्र्रिय आइटी बजारको सम्भावना नेपाली बजारमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । सोही अवसरलाई पछ्याउँदै अहिलेको नेपाली युवा पुस्ता आइटी तथा आइसिटीका कामकाजप्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । धेरैजसो युवाहरुले समूहको रुपमा वा केहीले एकल रुपमा संस्था एवं कम्पनी स्थापना गरेरै आइटीमा नयाँ सोच र जाँगरका साथ काम अगाडी बढाइरहेको ...